Soomaalida oo loo tababarayo jarida dhirka [Video] | gaani89
Soomaalida oo loo tababarayo jarida dhirka [Video]
Soo galootiga waxbarashadooda ay hooseyso qaasatan Soomaalida ayaa la sheegay in xal loo helay sidii ay u shaqeysan lahaayeen iyaga oo la barayo jarida dhirta.
Arintaan oo bilowgeedii hore aan wax ka qornay ayaa ku saabsan kamuunka Borlänge oo bilaabay mashruuc Soomaalida lagu barayo sidii ay u noqon lahaayeen shaqaalaha duurka oo sanadihii dambe ay ka jirtay dad la’aan. Mashruucaan ayaa qaasatan u wanaagsan Soomaalida oo qaar badan aysan luuqada ku wanaagsaneyn isla markaana aysan wadan waxbarasho aasaasi ah.
Maadaama aysan jirin wax shuruud luuqadood ama waxbarasho oo lagu xirayo shaqaalaha duurka ayaa kamuunka Borlänge waxaa soo gaaray codsiyo aad u badan oo ka imaanaya Soomaalida. Mid ka mid ah gacanyaraasha Borlänge ayaa sheegtay in Soomaalida telefoonka ka soo wacda aysan aqoon Swedish ka badan “Skogen” oo ah duurka.
Soomaalida laga shaqaalaysiiyay jarida dhirta ayaa muujiyay karti iyo rabitaan shaqo. Guud ahaan inta shaqada bilowday ayaa Swedishka u cadeeyay in ay yihiin dad wadanka u yimid in ay shaqeystaan balse aysan ceyr soo doonan.
Arinta shaqo la’aanta soo galootiga ayaa waxaa si wanaagsan ugu baraarugsan dowlada qaasatan raysal wasaaraha isaga oo ka hadlay arintaas qudbadiisii ugu dambeysay. Muhiimada ayaa ah in soo galootigu aan waxbarashada lahayn ay ka shaqeystaan shaqooyinka uu tartanku ku yaryahay ee aysan dooneyn Swedishka sida duurka iwm.www.gaani89.wordperss.com
Finland oo adkaynaysa mideynta qoysaska soo galootiga →